Ugeza kanjani ubuso bakho kahle | Amadoda aSitayela
Ugeza kanjani ubuso bakho kahle
Yiba nekilasi | | Izimonyo, Indlela yokuphila
Ezikhathini eziningi, sikhetha ukugeza ubuso bethu ngensipho namanzi, ukushefa bese siphuthuma lapho sisebenza khona. Uma ujwayele ukwenza lolu hlobo lwenhlanzeko, uzophinde uzwe ukuqina endaweni eseceleni yomlomo, imibimbi nezinye izimpawu eziningana. Namuhla sikufundisa geza ubuso kahle ukugwema le miphumela engathandeki.
Ukuhlanzwa ebusweni okulungile kubalulekile ekunakekelweni kwesikhumba okupheleleKodwa-ke, amadoda avame ukukhohlwa ngalo mkhuba onempilo wesikhumba sethu, okumele ube yinto ejwayelekile yansuku zonke uma sifuna ukuthi isikhumba sethu siphelele futhi sibe sincane ngokuhamba kwesikhathi.
Izisekelo ezi-5 zokugeza ubuso bakho kahle
Imikhiqizo yokuhlanza ubuso: Ukugeza ubuso ngamanzi akwanele. Kufanele siqede ukungcola kwemvelo, igrisi nomjuluko okufakwa usuku lonke esikhunjeni sethu, futhi ngenxa yalesi sizathu, kubalulekile futhi kuyisisekelo ukusebenzisa umkhiqizo wokuhlanza okuthi, lapho uhlangana namanzi, ususe uwoyela esikhunjeni bese ushiya dermis engenakho ukungcola.
Kunemikhiqizo eminingi ngezindlela ezahlukene ezifana nobisi, ama-tonics, insipho noma amagwebu, okusisiza ngale ndlela. Ngemuva kokufaka isicelo nokugcoba ubuso nomkhiqizo, hlambulula ngamanzi amaningi.
Ukukhuhla kuyadingeka: Ukukhuhla kusisiza ukuthi sihlanze isikhumba ngokujula Into ejwayelekile ukuwasebenzisa njalo ezinsukwini eziyi-15, kepha uma unesikhumba se-oilier nokuqoqwa kwenhlabathi kuma-pores kukhulu, ungakwenza kanye ngesonto. Yisebenzise ngamanzi afudumele ebusweni emibuthanweni emincane, ugcizelele izindawo ezinamafutha ebusweni ezifana nendawo ye-T. Bese ugeza ngamanzi afudumele.
Ngemuva kokomisa isikhumba sethu ngokuthinta okuncane ngethawula, ungalokothi uhudule, sizofaka i-toner ebusweni ezohlanza ngokuphelele ukungcola kwethu. Zisize ngokotini omncane ukuze ungene esikhunjeni ebusweni bonke, ngaphandle kokukhohlwa intshebe, ngoba izoyithambisa ukuze igundwe, bese iyayoma.
Isikhathi sokuthambisa. Hhayi noma yiziphi zazo ezilusizo kithina, kufanele sazi kancane ukuthi hlobo luni lwesikhumba esinalo futhi ngaleyo ndlela sikhethe oluhamba phambili ngezimpawu zethu. Yisebenzise ngemali encane (njenge-walnut) eminwebeni yakho, ubhucunga ubuso kusuka emathangeni, esilevini, ebunzini nasekhaleni.
Akufanele sikhohlwe okuthile okubaluleke kakhulu: Umugqa wamehlo okuzoba ngumlingani wethu omkhulu ukugcina isikhumba esihle samehlo ethu sisebancane ngokuphelele, futhi sinciphise ukubonakala kwezinyawo zegwababa. Ukufaka isicelo, ungahuduli umkhiqizo ngeminwe yakho. Isikhumba siba muhle futhi sibucayi njengalesi, kubalulekile ukuthi ukwenze ngokuthinta okuncane kuyo yonke indawo enentaba ukuze umkhiqizo ungene kahle. Faka ukhilimu wentaba kuyo yonke indawo yeso, kusukela esikhaleni kuze kube sekupheleni kweso, ngaphandle kokukhohlwa ingxenye engezansi yamashiya, ikona leso kanye nemibuthano emnyama, usebenzisa ukuthinta okuncane njengokumasaja ngezandla zomunwe . Uma ubona kuyinkimbinkimbi, ungazisiza ngokubuka iso ngefomethi ye-roll-on.
Ngalezi zeluleko ezincane uzofinyelela kalula isikhumba esihle nesithombe esihle.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Izimonyo » Ugeza kanjani ubuso bakho kahle
lapho ngithenga khona lo mkhiqizo eNetherlands, ngizojabula kakhulu ,,, ukuqabula okuhle ISIHLOKO SIYABONGA… ..
Sawubona, ngiyabonga ngokuphawula kwakho. Mhlawumbe kule webhusayithi http://www.ixiparisxl.nl Bangakusiza ukuthi uthole isitolo lapho kuthengiswa khona imikhiqizo ye-L´oreal.
Bopha isiqeshana, yebo noma cha?
Uthayi noma uthayi womnsalo?